महसुस बनेको लेख: आफ्नै हातले ढाँचा। रचनात्मक विचार
यस्तो महसुस रूपमा सामाग्री पूर्ण बिभिन्न कामहरू गर्न सक्छ। हामी तपाईंलाई कसरी बनाउने सिक्न प्रस्ताव महसुस देखि शिल्प आफ्नै हातले ढाँचा, र विभिन्न खिलौने। चरण कार्यशालाओं द्वारा उत्पादन र चरण को तस्वीर संलग्न।
महसुस बनेको लेख - आफ्नै हातले नमुना
तिनीहरूले प्रत्येक अन्य सिलना छन् धेरै सजिलो छ जो भागहरु को न्यूनतम, समावेश किनभने बनाइएका विभिन्न खिलौने र गुडिया, एकदम सजिलै लाग्यो।
नमुना रूपमा, तपाईं कुनै यस्तो छ भने पनि, यो आफैलाई गर्न सजिलो छ। यस मामला मा वैकल्पिक कला कौशल छ। महसुस शिल्प को एउटा उदाहरण तल चित्रमा। यस मामला मा आफ्नै हातले ढाँचाहरू जस्तै तत्व समावेश:
पखेटा (दुई टुक्रा)।
तपाईं व्यक्तिगत रूपमा उत्तिखेरै भागहरु आकर्षित गर्न सक्नुहुन्न भने, सम्पूर्ण भविष्यमा खिलौने को एक स्केच बनाउन, र त्यसपछि तत्व गरेर विभाजन।
आफ्नो हातमा लाग्यो बनेको गुडिया
मास्टर वर्ग, कसरी बनाउने एक खेलौना princesses यो सरल शिल्प सिक्न हुनेछ:
विभिन्न रंग, कैंची, मार्कर वा पेन्सिल, मुद्दा र सुई, एक सानो ऊन मा महसुस को स्क्रापहरू, साथै ढाँचा लिनुहोस्।
तपाईं एक विशेष राजकुमारी लागि विवरण देखाउँदछ आधारभूत ढाँचा (चित्रा 2) र एक अतिरिक्त (चित्रा 3), आवश्यक हुनेछ। उदाहरणका लागि, तपाईं साना मत्स्यस्त्री बनाउन भने, यसको hallmarks को केश, पुच्छर र शीर्ष छन्।
कैंची संग ढाँचा सबै तत्व बाहिर कटौती।
अनुकूल रंग (जस्तै, शरीर - बेज रंग) कागज वस्तुहरू महसुस गर्न संलग्न र तिनीहरूलाई आकर्षित।
विवरण बाहिर कटौती, किनाराको देखि एक सानो फिर्ता कदम। आधारभूत ढाँचा प्रत्येक तत्व दुई र अतिरिक्त जोडी मात्र पोशाक (पोशाक) को लागि आवश्यक संख्या हुनुपर्छ भनेर नबिर्सनुहोस्।
एउटा सानो खोल्ने छोडेर सँगै शरीर र टाउको को दुई भागहरु सी।
गुडिया गर्न detalek ऊन भित्र Tamp पनि सपाट थिएनन्।
टाउको र शरीर सँगै सी।
अगाडि पक्षमा कपाल र bangs को टाउको सी।
दुई पक्ष बाट शरीरमा पोशाक (पोशाक) सी।
सी वा बाँकी सजावटी तत्व पोशाक र Hairstyles को पुतली को सामने मा गोंद बन्दूक मार्फत गोंद।
आफ्नै हातमा गुडिया तयार महसुस देखि!
को प्यारा खेलौना महसुस बनेको बनाउन क्रममा, आवश्यक रंग पैच को एक ठूलो संख्या आवश्यक छैन। कहिलेकाहीं यो टुक्रा मात्र एक जोडी छ। उदाहरणका लागि, एक आकर्षक भालु बनाउन, खैरो र रातो रंग को महसुस मात्र दुई टुक्रा आवश्यक छ।
महसुस देखि शिल्प बनाउन काम को अनुक्रम:
विशिष्ट उदाहरण आफ्नो हातमा ढाँचाको अनावश्यक हुन सक्छ। तपाईंले तुरुन्तै कपडा मा भविष्यमा खिलौने को रूपरेखा आकर्षित गर्न सक्छन्। टाउको, शरीर र एउटा सानो मुटु: विवरण मात्र तीन हुनेछ।
लाग्यो को टाउको र शरीर को दुई भागहरु बाहिर कटौती।
शरीर को देखिने भाग खुट्टा को बायाँ क्षेत्रमा हृदय सी।
भराई लागि एउटा सानो खोल्ने छोडेर भागहरु को एक जोडी बीच सी।
एक काठ छडी प्रयोग भाग खिलौने ऊन वा अन्य excipient (जस्तै, कृत्रिम गद्दी) tamp। को Hack मा सामान एक धेरै आवश्यक छैन, यो केवल एक सानो मात्रा हुनुपर्छ। बरु तपाईं एक पेन्सिल वा ब्रश प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ छडी भन्दा।
आफ्नो चिउँडो (जस्तै माथि चित्रमा) को खेलौना को मुख्य भाग थियो भनेर निकाय टाउको सी।
थूथन र खुट्टा को आकृति मार्कर टाँका वा कढाई सूत्रहरू आकर्षित गर्न सक्नुहुन्छ।
प्यारा टेड्डी भालु तयार छ! यो खेलौना मात्र बच्चा गर्न सकिन्छ, तर पनि प्रणय दिवस मा मित्र दिन!
तपाईं पनि सामान्य र भारी खेलौना महसुस बनेको गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, यस्तो ठूलो छाप बनाउन, तपाईं निम्न उपकरण र सामाग्री लिन आवश्यक हुनेछ:
multicolored felts (एक प्राथमिक रंग, र अतिरिक्त रंग को सानो पैच);
मुद्दा र सुई;
फिलर (अस्तर, padding पलिएस्टर, रबर फोम र जस्तै)।
खिलौने सिर्जना मा मास्टर-वर्ग:
एक नासपाती को आकार resembling लिन महसुस एक ठूलो टुक्रा र दुई समान गोलो यसलाई बाहिर कटौती,।
एउटै रंग को एक टुक्रा देखि, दुई समान सर्कल कटौती। तिनीहरूले अघिल्लो भागहरु को आधा भन्दा कम हुनुपर्छ।
अब तपाईं ट्रंक र टाउको लागि विवरण छ।
गोलाकार भन्दा माथि संग चार ट्यूटोरियल कटौती। यो कान हुनेछ।
खिलौना प्रत्येक घटक मा एक सानो प्वाल छोडेर, प्रत्येक अन्य पुर्जा, टाउको र कान संग जोडीएको सी।
दृढ भएको फिलर शरीर र टाउको tamp। lugs मा कपास ऊन को पातलो तह राखे। बिरालो शरीर लागि जिम्मेवार विवरण तल, खिलौना गर्न पनि धेरै काम गर्न यसको आफ्नै मा खडा गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रत्येक अन्य शरीर, टाउको र कान सी।
रंग लाग्यो को, फूल र पात कटौती, र त्यसपछि तिमी छाप तिनीहरूलाई सी।
किट्टी थूथन Embroider र घाँटी वरिपरि रिबन बाँध।
आकर्षक खेलौना तयार छ! वैकल्पिक, तपाईं शरीर टाउको गरे जस्तै तरिकामा खुट्टा र पुच्छर सी गर्न सक्नुहुन्छ।
Piggy लगभग हरेक बच्चा लायक। तर समय आउँछ जब तपाईं यसलाई pathetic हुन्छ विभाजित। त्यसैले Kiddies जो देखि यो एक सिक्का प्राप्त गर्न धेरै सजिलो छ जस्तो लाग्यो, एक अद्भुत खजाना बनाउन सक्छ।
यो गर्न, तपाईं महसुस कैंची, सुई र मुद्दा, एक मार्कर ढाँचा खुत्रुके लिनु आवश्यक। अर्को कदम:
को कपडा मा ढाँचा गर्नुहोस् र दुई समान तत्व कटौती।
सर्किट मा एक आयत सी, र यो भित्र चीरा (चित्रा 2) बनाउन।
दुई टुक्रा सँगै सी।
Piggy तयार छ!
हात खेलौना मा
अर्को मास्टर वर्ग - हातमा लाग्यो बाँदर को:
ढाँचा बनाउन। कागज को टुक्रा मा यो सर्कल आफ्नो हात लागि। बराबर एक आकृति, डोरिस पंजे पंजे र कान आकर्षित। अलग आकृति अनुहारहरू र तिमी, साथै खुट्टा मा lugs र औंलाहरु क्षेत्र को आन्तरिक भागहरु आकर्षित।
को महसुस गर्न तत्व को सबै संलग्न र सर्कल तिनीहरूलाई काट। मुख्य भागहरु (ट्याबहरू संग शरीर) दुई औंला संग Eyelets र क्षेत्र को लागि seredinok रूपमा हुन भनेर याद गर्नुहोस्। तिमी र एकल प्रतिलिपि मा थूथन।
लिन शरीर को एक भाग र यो nasheyte सबै थप तत्व: को थूथन क्षेत्र, तिमी, कान र औंलाहरु को भित्र।
दुई पुर्जा सँगै सी।
एक थूथन गर्नुहोस्।
को Mitten-बाँदर तयार महसुस!
वैकल्पिक, तपाईं एक खेलौना पुच्छर बनाउन सक्छ। को ऊनी सूत्रहरू, यस गर्न चुल्ठो गर्न र भित्र तार राख्न। परिणामस्वरूप हात बनाएको लेख गर्न पुच्छर संलग्न गर्नुहोस्।
मास्टर वर्ग: आफ्नो हात संग मुद्दा को खिलौने
कार्ड जन्मदिनको: बच्चा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ध्यान छ
अनाज देखि आफ्नो हातमा शिल्प। कसरी माटो र अनाज बाहिर शिल्प बनाउन
समीक्षा "Ksenikale" - दबाइ सत्य
होटल Dessole कोरल होटल3* (ग्रीस / क्रेते): पर्यटन, फोटो, समीक्षा
मनोरञ्जनको लागि विकल्पको रूपमा Pestovo Reservoir
एक स्वचालित समापन मिसिन - यो कसरी विशेष छ र यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने?
लोकप्रिय आहार डाक्टर। समीक्षा र परिणाम
छाला पेन्सिल स्कर्ट: लगाउन के? सुझाव स्टाइलिस्ट